Sales Admin at Century Beverage Company
Job Reference: MJ1564373881526
အသက် (၂၅- ၃၀ ) ကြား
ဘွဲ့ရ ဖြစ်ရမည် ။
LCCL Level (III) အောင်မြင်ရမည် .
သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း အ တွေ့ အကြုံ (၂)နှစ်နှင့် အထက်ရှိရမည် .
အချိန်ပေးလုပ်ကိုင် နိုင်ရမည် .
ရုံးလုပ်ငန်း အ တွေ့ကြုံ (၂) နှစ် ရှိရမည်